ပုံနှိပ်နိုင်လွန် Webbing，PVC Coated Webbing ပေးသွင်း，စိတ်ကြိုက် Polyester PVC Jacquard ဝက်ဘ်
အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများ, အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်ပေါင်းစပ်။ ကုမ္ပဏီ၏ ISO9001 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြင့်ထောက်ပံ့ထားသောကမ္ဘာ့အဆင့်မီ webbing ထုတ်ကုန်များကိုဖန်တီးသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်တိကျသောအရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားစိတ်ချစေရန်သေချာစေမည်. မည်သို့ပင်လျှောက်လွှာ၏, အရည်အသွေးမြင့်သော webbing ထုတ်ကုန်များကိုအာမခံပါသည်.
Jingye Webbing သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, ဖက်ရှင်အဝတ်အစားများအတွက်တန်ဖိုး -added က်ဘ်ဆိုက်ဖြေရှင်းချက်, စစ်ရေးပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနှင့်ပြင်ပထုတ်ကုန်, အထူးပစ္စည်းကိရိယာများ, စသည်တို့. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိပညာနှင့်ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံများမှခိုင်မာသောကျောထောက်နောက်ခံနှင့်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်, ကျွန်ုပ်တို့သည် webbing ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်.
Jingye Webbing သည်ချည်ခြင်းနှင့် webbing ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, Co-production နှင့်တပ်ဆင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတရုတ်နိုင်ငံနှင့်ပြည်ပရှိ. ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်လစီသည်ဖောက်သည်များအားကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအားအသေးစိတ်နှင့်စျေးနှုန်းနှင့်အညီထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်. ISO သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်သို့မဟုတ်ကျော်လွန်ရန်လုပ်ဆောင်မည့်အရည်အသွေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖောက်သည်များ၏ကျေနပ်မှုကိုရရှိရန်ကုမ္ပဏီမှကတိပြုသည် 9001.
ထက်ပိုသည် 20 နှစ်ပေါင်း, ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရှင်များသည် webbing အရည်အသွေးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမရပ်တန့်ပါ, ပိုမိုမြင့်မားသောအရောင်အစာရှောင်ရန်, ပိုကြီးတဲ့ကြေကွဲအစွမ်းသတ္တိ, ပိုပြီးတာရှည်ခံစေရန်, ပိုပြီးအသားအရေ - ဖော်ရွေ, ပိုပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ, ရေစိုခံဖို့, မီးတောက်, အနီအောက်ရောင်ခြည်နှင့်ခရမ်းလွန်ဆန့်ကျင်မှုဂုဏ်သတ္တိများ. ဖောက်သည်များအစေခံနိုင်ရန်အတွက်, ကျနော်တို့၏နိယာမကိုလိုက်နာ "ပထမ ဦး ဆုံးအရည်အသွေး, ပထမ ဦး ဆုံးဝန်ဆောင်မှု". ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ထားစာနာသော ၀ န်ဆောင်မှုသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်နှင့်အတူလိုက်ပါမည်ဟုမျှော်လင့်ပါ.
Jingye Webbing သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကို Custom Quality Webbing ၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်သည်, ဆွဲငင်အား Webbing, စစ်ရေး Webbing, အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Webbing နှင့်အလွန်အမင်းတောင်းဆို Webbing
35မီလီမီတာ Polyester ခါးပတ်ခါးပတ်
Polyester elastic webbing ပုံနှိပ်
Polyester တပ်လှန့် webbing
Polyester ရောင်ပြန် webbing
Polyester twill အပူလွှဲပြောင်းပုံနှိပ် webbing
နိုင်လွန် tubular webbing
webbing နိုင်လွန် jacquard
webbing ကိုနိုင်လွန်မြင့်မားသော elasticity အရက် jacquard
လိပ်စာ: B1 အဆောက်အ ဦး,A5 ခရိုင်,Buyong Tongfuyu စက်မှုဥယျာဉ်,Shajing Town,Bao'an ခရိုင်,Shenzhen Guangdong,တရုတ်
ဖောက်သည်များကိုအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြင့်ထောက်ပံ့ရန်ကြိုးစားသည်. သတင်းအချက်အလက်တောင်းခံပါ,နမူနာ & ကိုးကား,ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
မူပိုင်ခွင့်© 2022 Shenzhen Jingye ဆက်စပ်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီ, Ltd အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များနှင့် Privacy မူဝါဒ